किन दुख्छ महिनावारीका वेला पेट ? स्वास्थ्य सन्देश – Hamrosandesh.com
किन दुख्छ महिनावारीका वेला पेट ? स्वास्थ्य सन्देश
महिनावारीका समयमा महिलामा सामान्य ढाड वा पेट दुख्ने, थकान महसुस हुने आदिजस्ता समस्या हुनुलाई स्वाभाविकै मानिन्छ । तर, सहनै नसकिने गरी तल्लो पेट दुख्नु भने समस्या हो । आजभोलि अधिकांश महिलामा पेट दुख्ने समस्या देखिन्छ, जसमध्ये पनि किशोरीहरू बढी पीडित छन् ।किशोरीहरूमा महिनावारी हुँदा सहनै नसक्ने गरी पेट दुख्नुका साथै वाकवाकी लाग्ने, कम्मर वा ढाड दुख्ने, खान मन नलाग्नेजस्ता हुन्छ । यस्ता समस्याका कारण नियमित काम गर्नसमेत गाह्रो हुने गर्छ ।
विभिन्न कारणले किशोरीहरूको तल्लो पेट दुख्ने गर्छ । त्यसमध्ये उनीहरूमा देखिने डिस्मोनोरिया मुख्य हो । खासमा यो समस्या विनाकारण हुने गर्छ । प्रायः जनेन्द्रियमा हुने यो रोग सेकेन्डरी फेजमा पुगेपछि यसले महिनावारी पीडादायक बनाउने गर्छ । पाँचदेखि १० प्रतिशतमा कहिलेकाहीँ जनेन्द्रियमा कुनै समस्या नभए पनि डिस्मोनोरिया हुन्छ । दुखाइ कम गर्न खाइने पिल्स, एस्पोरिन, बुर्फिन, सिटामोल आदि औषधि यसका कारक मानिन्छ । यस्तो अहिले बढ्दो क्रममा छ ।
महिनावारी समयमा नहुनु, भए पनि रगत धेरै बग्नु, यौनसम्पर्कका वेला पीडा महसुस हुनु, बाँझोपन तथा अत्यधिक सेतो पानी बग्नु आदि पनि यसका लक्षण हुन् । यस्तो समस्या औषधिले पनि तत्काल ठीक गर्दैन ।
योबाहेक पाठेघरमा ट्युमर र इन्फेक्सन हुँदा पनि पेट दुख्ने समस्या हुन सक्छ । प्रजनन रोग, अण्डाशय तथा अण्डबाहिनी नलीमा समस्या आउनु, गर्भनिरोधक औषधिको अनियमित प्रयोगले पनि पेट दुख्ने हुन्छ ।
पेट दुख्ने विभिन्न कारण भएकाले पहिले त के कारण हो, पत्ता लगाउनुपर्छ । पेट तथा जनेन्द्रियको आन्तरिक परीक्षण, अल्ट्रासाउन्ड, ल्याप्रोस्कोपी परीक्षणबाट कारण पत्ता लगाउन सकिन्छ । पत्ता नलागेसम्म जथाभावी औषधि प्रयोग गर्नुहुँदैन ।
तल्लो पेटको कडा मांसपेशी नरम बनाउन घरमै बसेर हलुका मालिस गर्न सकिन्छ । तातो पानी, कपडा वा अन्य केही तातो वस्तुले हलुकासँग पेट सेक्दा पनि केही हदसम्म राहत मिल्छ ।
अदुवापानी तताएर खाँदा दुखाइ कम हुन्छ । सकेसम्म साथीहरूसँग घुम्ने, कुरा सेयर गर्ने अनि आवश्यक आराम गर्ने गर्नाले पनि हलुका महसुस हुन्छ ।